Relationship – SoShwe
စေ့စပ်ပွဲအမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ရာမှာ အမှတ်ရဖွယ်အလွဲအချော်တွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး။
May 23, 2022	Funny 0
လူအများစုက ၄င်းတို့ရဲ့ချစ်သူကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတော့မယ့်အခါမျိုးနဲ့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးရတဲ့ မိသားစုဝင်၊ ချစ်သူနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အံ့အားသင့်စေမယ့် လက်ဆောင်တွေ ပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဗီဒီယိုရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ Alyssa Snodsmith ဆိုသူနဲ့ Collin Hewett တို့ နှစ်ဦးဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ချစ်သူစုံတွဲဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ချစ်သက်တမ်းဟာလည်း သုံးနှစ်ကျော်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Collin က သူနဲ့သဘောထားတိုက်ဆိုင်ပြီး နားလည်မှုရှိတဲ့ချစ်သူလေး Alyssa ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာတော့ သူတို့စေ့စပ်ခဲ့တာ ၂ နှစ်ပြည့်ပြီလို့ဆိုရမှာပေါ့။ ၂ နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ယခင်နှစ်က အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ပျော်စရာကောင်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရလေးတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ ပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Collin နဲ့ Alyssa …
May 21, 2022	LifeStyle 0
အကယ်၍ စာဖတ်သူတွေထဲမှာ ယခုလက်ရှိရည်းစားနဲ့ တွဲနေတာ ၂နှစ်ကျော်ကြာနေပြီဆိုရင် မိမိကိုယ်ကို မေးသင့်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေရှိပါတယ်။ ၁။ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးလိုချင်လား? လိုချင်ရင်ရော ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် လိုချင်တာလဲ? ၂။ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ရော အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ၃။ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘယ်လိုမျိုး ယူဆယုံကြည်ထားလဲ? ၄။ ကိုယ့်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးကို ဘယ်လိုမျိုးစီမံခန့်ခွဲမလဲ? ယခုလက်ရှိမှာရော ဘယ်လောက်စုမိဆောင်းမိထားလဲ? ၅။ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအပေါ် ကိုယ့်မိသားစုက ဘယ်လိုမျိုးသဘောထားလဲ ? ၆။ သန္ဓေတားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ရော ဘယ်လိုထင်လဲ? ၇။ အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူက ဘယ်လိုသဘောထားလဲ? ၈။ မျိုးရိုးလိုက်တဲ့ရောဂါမျိုး မိသားစုဝင်တွေ ခံစားရဖူးလား? ၉။ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုက ဘာဖြစ်မလဲ? ၁၀။ …
အချစ်စစ် အချစ်မှန်တို့ရဲ့ သဘောသဘာဝ။
ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အချစ်စစ်ကိုရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ခက်ခဲသွားပါပြီ။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်း အများကြီးလို့ ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စုံတွဲတစ်တွဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့မူလပုံစံကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်း အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်ချင်ကြတာကြောင့်ပါ။ ဥပမာပြောရရင် သူ မကြိုက်တဲ့အစားအသောက်ကို ကိုယ်ကအတင်းစားစေချင်တာမျိုး၊ သူနားမထောင်ချင်တဲ့ ဂီတအမျိုးအစားတွေကို ကိုယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတိုင်း အတင်းအဓမ္မ နားထောင်ခိုင်းတာမျိုးတွေက ကိုယ့်ချစ်သူကိုချစ်တာမဟုတ်ဘဲ နှစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးကြိုးစားတိုင်း ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့က အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ကိုယ့်အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်က ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးကို မမျှော်လင့်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ်ကသာ ချစ်သူအပေါ် အမှန်တကယ် ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ရှိရင်းစွဲပုံစံတွေကို လက်ခံနိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပြီး ကိုယ်သဘောမကျတဲ့အရာတွေကို မရမက ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုက ဘယ်လိုမှ ကောင်းမွန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားနိုင်ပါတယ်။ သမီးရည်းစားဆက်ဆံရေးတွေမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် …
၄၃ နှစ်ကြာမှ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့အဖြစ်။
April 25, 2022	LifeStyle 0
Ohio ပြည်နယ် Columbus မှာနေထိုင်တဲ့ Howard Foster နဲ့ Myra Clark တို့နှစ်ဦးဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မေတ္တာသက်ဝင်နေတဲ့ လူမျိုးမတူ အသားရောင်မတူတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုခေတ်အခါက အာဖရိကန် – အမေရိကန်လို့ယူဆတဲ့ အညိုရောင်အသားရေရှိသူများကို အဖက်ဖက်မှ ဖိနှိပ်ခဲ့ကြတဲ့အပြင် ၄င်းတို့နဲ့အတူ တွဲသွားတွဲလာ လုပ်တဲ့သူတွေကိုပါ နှိမ့်ချဝေဖန်ပြောဆိုတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဟာ ဆိုးရွားလာခဲ့ပြီး လူမျိုးမတူ၊ အသားရောင်မတူတဲ့သူနှစ်ဦး ချစ်မေတ္တာသက်ဝင်နေတာကိုပါ ငြိုငြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအချိန်ကလည်း Howard က အာဖရိကန် – အမေရိကန်လူမဲဖြစ်ပြီး Myra Clark က အမေရိကန်လူမျိုး ဖြစ်ကြပါတယ်။ Howard တို့နှစ်ဦးက အတူတူ …
အလုပ်များသူတွေအနေနဲ့ ချစ်သူကို အချိန်ပေးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ။
April 19, 2022	LifeStyle 0
အလုပ်လုပ်ရတာ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအနေနဲ့ အမြဲတမ်း အလုပ်ချည်းပဲ ထိုင်လုပ်နေလို့မဖြစ်ဘဲ ဘဝရှေ့ခရီးအတွက် ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ချိန်းတွေ့ဖို့၊ ပျော်စရာအချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်မှာလည်း အလုပ်ကို အလွန်အကျွံစွဲလမ်းတာမျိုးကြောင့် ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့ဖြစ်ရင်တောင် စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ချိန်းမတွေးနိုင်ဘဲ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူနဲ့ တွေ့ချိန်မှာတော့ အလုပ်တွေကို ချန်ထားခဲ့ပြီး သူ့အတွက် အချိန်ပြည့်ပေးထားသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အလုပ်အရမ်းရှုပ်တဲ့သူတွေအတွက် ချစ်သူကိုလည်း အချိန်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ ၁။ ချိန်းတွေ့နေချိန်မှာ သင့်ဖုန်းကို အသံပိတ်ထားပါ။ ဘယ်လိုပဲ အလုပ်ပြီးအောင်လုပ်ခဲ့ပါစေဦး၊ သင့်ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့နေချိန်မှာတော့ ဖုန်းကနေ သေချာပေါက် အလုပ်ကိစ္စ ဆက်သွယ်တာတွေ ရှိမှာပါ။ အဲ့ဒီအခါကျရင်တော့ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် အာရုံနောက်စရာ …
အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က ဘယ်အချိန်ဖြစ်မလဲ ? ? ?
လူတစ်ယောက်အတွက် ဘယ်အချိန် အိမ်ထောင်ပြုတာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်လဲ ? ? ? အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ စောတိုင်းလည်းမကောင်းသလို အသက်အရမ်းကြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အချစ်တစ်ခုတည်းကို မူတည်ပြီး အိမ်ထောင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်လို့မရသလို အချိန်မတန်သေးပဲ တည်ဆောက်တဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုကလည်း သာယာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ထောင်ပြုမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ဘယ်အချိန်မှာ အိမ်ထောင်ပြုရင် အကောင်းဆုံးလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ (၁) ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့အချိန်။ လက်ထပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားရင် ယောကျ်ားလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ် ရပ်တည်နိုင်ပြီလို့ ခံစားရတဲ့အချိန်မှသာ လက်ထပ်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မိဘအပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ပေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ် မှီခိုအားထားနေရတဲ့ …
တစ်လလုံးလုံး ချစ်သူကောင်မလေးမသိအောင် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့တဲ့အမျိုးသား။
April 17, 2022	LifeStyle 0
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ချစ်သူစုံတွဲတွေအကြား လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံပုံအမျိုးမျိုးကို တွေ့မြင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့အတူ Romantic ဆန်တဲ့နေရာမျိုးမှာ ပူဖောင်းတွေ၊ နှင်းဆီပန်းတွေအသုံးပြုပြီး ချစ်သူရည်းစားကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံတဲ့ပုံစံဟာ အရင်အချိန်အခါတုန်းက ခေတ်စားခဲ့ပြီး အခုချိန်မှာတော့ နည်းလမ်းအသစ်တွေနဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံလာကြတာကို တွေ့မြင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးမသိအောင် တစ်လလုံးလုံး လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကာ မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ ဟဲလ်ဖို့ဒ်ရှိုင်းယားမှာနေထိုင်တဲ့ Edi Okoro ဆိုတဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ်အမျိုးသားဟာ စိန်လက်စွပ်တစ်ကွင်းဝယ်ယူပြီး သူ့ချစ်သူကောင်မလေး Carly Read မသိအောင် လက်ထပ်ခွင့်တောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုး တစ်လလုံးတိတိ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကာ စုဆောင်းခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးအ့ံအားသင့်အောင် ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြကာ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Edi အနေနဲ့ မတူညီတဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ လက်စွပ်လေးဖြင့် …
ပရိသတ်တွေမသိအောင် တွဲခုတ်ခဲ့ကြပြီးမှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်များ။
အခုတစ်ခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေမသိအောင် တိတ်တိတ်ပုန်း တွဲခုတ်ခဲ့ကြပြီး ကွဲကွာခဲ့ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော်အနုပညာရှင်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အထင်ကရ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို Soshwe ပရိသတ်ကြီးအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Sandra Bullock and Ryan Gosling တွဲခုတ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်ကာလ: 2002-2003 Sandra ရဲ့ အထင်ကရရုပ်ရှင်: The Proposal and The Blind Side. Ryan ရဲ့ အထင်ကရရုပ်ရှင်: The Notebook and La La Land. ၂။ Anna Kendrick and Edgar Wright တွဲခုတ်ခဲ့ကြတဲ့အချိန်ကာလ: 2009-2013 Anna ရဲ့ …